Buuxi Billowga Guide Si Italy By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Buuxi Billowga Guide Si Italy By tareenka
Iska diyaar u ah inay la Rujiyo la Italy tareen by xilligan aad talaabo cagta eee ay ciidda weyn. dalkii reer taariikhda, naqshadaha weyn, dhaqan xad dhaaf ah, iyo sida xarrago leh, casri ah, dadka akhlaaqda wanaagsanina waxay noqon doonaan wax aad xusuusan doontid ilaa maalintaada ugu dambaysa! Raba inuu ogaado sir? Italy tareen waa ka sii cajiib badan waad qiyaasi kartaa!
Hadda, tan iyo markii aad in socday dalkii reer Romeo iyo Juliet tareen, halkan waa qaar ka mid ah talooyin waxtar leh oo aad u badan tahay u baahan doontaa in la raaco (gaar ahaan haddii aad weligayo in Italy iyo aadan ku hadlin afka si fiican):
Helitaanka Your Jidka agagaarka Italy By Schedule tareenka
Waayo, mid kasta safar Italy tareen oo doonaya in ay si wadajir ah u hesho xaqiiqooyinka ay, kala dooran:
Trenitalia, adeegga tareenka qaranka oo dhan wadooyinka qaranka; waa tareen xawaare joogto ah.
Italo tareenka, for-xawaaraha sare ee tareenka / wadooyinka.
ikhtiyaarka ugu fiican yahay si aad u hubiso soo baxay Italy tareen, iyo in ay ahaan dhinaca nabad ah: isbarbar dhig qiimaha, taariikhaha, iyo waqtiyada iyo hel ikhtiyaarka ku habboon miisaaniyaddaada iyo khariiddada safarkaaga. Eegno labada inay is barbar dhigaan jadwalka. u badan tahay in lagu qaldin doonaa inaad eraybixinta ah, sidaas darteed halkan yihiin foomamka soo gaabiyey waxaad ka heli doontaa on the Goobta Trenitalia:
Rome Termini (saldhiga dhexe) -> TE ROME
Naples Dhexe (saldhiga dhexe) -> NA C.The
Florence Santa Maria Novella (saldhiga dhexe) -> Fl.SMN
saldhigga tareen Venice Santa Lucia
Venice Saint Lucia (jasiiradda) -> IYO. S.L.
Venice Mestre (on waynaha) -> Macallimow
Milan Dhexe (saldhiga dhexe) -> MI C.le
Piazza Principe (saldhiga dhexe) -> GE P.P.
La Spezia Centrale (saldhiga dhexe) -> Spice
Pisa Centrale (saldhiga dhexe) -> PISA C.
Waxaa jiri doona waqtiyo marka aad qaadato Italy tareen hal tareen magaca saldhiga aad hogaanka calaamadeeyay in madow arki doonaa, raacay by dadka kale qaar ka mid ah oo cas; this muujinaysaa waxaa jira saldhigyada tareenka yar ee magaalada aad ku safraya, wadatay aad qaadato oo dhan joogsiyada tareenka.
Florence si Tareenadu Pisa
Milan in ay Tareenadu Florence
Waa in aad buugga Italy by Ticket tareen Online ama iibso Waxa at Station ah?
Akhbaarta ugu fiican ee ku saabsan tikidhka aad ku tagi karto tareenka tareenka ayaa ah in nidaamka ballansashada khadka tooska ah ee internetka uu u shaqeeyo si hagar la’aan ah waana mid la isku halleyn karo. Stations jiri karto meel walba buuxo - oo u baahan nooca IN of stress, xaq u? Waxaa lagu siinayaa ikhtiyaarka in ay ama buug ama si toos ah bixiso tigidhada tareenka online. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad tahay oo dhan oo ku saabsan Ukaalmayn - sugto ilaa aad hesho si aad saldhigga iyo iibsato tigidhka ka dibna.
Cologne si Tareenadu Dortmund
Munich in ay Tareenadu Dortmund
Hanover in Tareenadu Dortmund
Frankfurt inay Tareenadu Dortmund
Sidee Baan in Italy tareen Marka aad qaadatay Ticket?
Marka aad hesho in Italy ay tareenka, aad qorista soo socda waa guddi daah weyn. Taasi waa halka aad ka heli doonto dhammaan macluumaad cusbooneysiiyay aad u baahan tahay. Haddii aadan arkin guddiga, raadiyo dad ka mid ah dadka hoose wax weyn taagan - oo voila! Haddii aad uma fiirsatid aad tareen isla markiiba ku qoran, ha bilaabin argagaxsanaayeen. Hubi in aad raadinayso ee "Partenze" (bixitaanka) halkii "Arrivi" (dhowaan yimid) si looga fogaado jahawareer. Fursada ugu yaraan wareer ah oo dhan waa in ay tagaan waqtiga tirada tareen oo ka tagay. Marka aad hesho tareenka, ka raadi "QASHIN,"For" binario " (madal). Marka aad heshay in soocaa, aad tahay xaq in ay tagaan!
Waxaa jiray kaftan ah waxaan maqlay mar: Mar kasta oo aad ka dareento foolxun ama cidlo, tag Italy tareen. Macna ma laha inta ceeb aad eegto, ragga maxalliga ah qaylin doonaa "Bella!"Aad ka dib. jeclaysto, xaq u? Ha sugin daqiiqadii dheer, jartaan tikidhka aad ugu saveatrain.com iyo bilowdo xirxiraan for Italy!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-to-italy-by-train%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
tigidhada tareenka tareen safarka travelitaly